နွေဆူးလင်္ကာ: ဈေးသည်ကြီး ဆန်ရွှေ
တခန်းရပ်ပြဇာတ်က တကယ် ကလို့တောင် ရတဲ့ ဇာတ်ကလေးပဲလေ..
ဖေ့ဘွတ်မှာ remove လုပ်မိထားတယ်။ စိတ်မရှိပါနဲ့ ... ပြန်အတ်ပေးပါဦး။
အလွန်ထိမိတဲ့ တခန်းရပ်ပြဇာတ်လေးပါဘဲ ...
မှန်တယ် မှန်တယ် . လောက်စလုံးက နဖူးတဲ့တဲ့ ..
ဈေးသည်ကြီးငရွှေက နောက်ဆို အွန်လိုင်းကနေဘဲ ရောင်းတော့မှာတဲ့ ဗျိုးးးးး
ဆက်ရေးပါဦးးးးကိုနွေဆူး ရေ ..
:) သဘောကျ ပြုံးမိသွားပါတယ် အစ်ကိုနွေဆူး။ ကုန်အောင်ထိရောင်းပြီးမှ ကြွမယ်ထင်တယ် :D
ဈေးသည်ကြီး ဆန်နီပဲကြားဖူးတာ။ ခုတော့ဆန်ရွှေပါပေါ်လာပြီ။ ညီအစ်ကိုလား ၊ သားအဖလားမသိဘူးနော်။း)
ဟိဟိ နီးနေပြီနော် ကားပြာလေးကို စီးကာရယ် ဟဟဟဟ
ဖတ်ပြီး ပြုံးသွားတယ် နော် ရီလဲရီသွားတယ် သိလား ဟဟ
သူတို့တဆွေလုံးဆမျိုးလုံး ဗိုက်ဝရင်ပြီးပြီဗျ ... ပြည်သူ တွေ သေသေကြေကြေ သူတို့အလုပ်မဟုတ်ဘူး .. တိုင်းပြည်လဲ ကုန်းကောက်မရအောင် သူတို့ ခိုးရောင်း မယ် ... ဒါသူတို့ရဲ့  ဈေးကွက်စီးပွါးရေး ...
Very nice.a yan kgg dae.Really.